တောင်ငူသား: ခုတော့ဖြင့် ဒီတောင်ငူမှာလေ
ဒီနေ့ကျောင်းစဖွင့်တဲ့နေ့ပေါ့။ တတိယတန်း(က)ဆိုတဲ့အခန်းထဲကို ကျောင်းသူမလေးတစ်ယောက်ဝင်လာတယ် ဆံပင်ဂုတ်ဝဲလေးနဲ့။ ဟာ... သူမလေးပါလား။ "ကြည်ပြာ" ရယ်လေ။ ဒါဆိုသူမလေးက ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြောင်းလာပေါ့။ သူမလေးနဲ့ နွေကျူရှင်တုန်းက အတူတူတက်ခဲ့ရတယ်လေ။ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ မတွေ့ရတော့ဘူးထင်တာ။ ခုတော့ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်သွားတယ်။ သူမလေးလည်း စာတော်တယ်ဗျ။ အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျက်စာဆိုရင် အတိုကောက်လေးတွေ သင်ပုန်းကြီးပေါ်မှာ ရေးပြီးတော့ စာကျက်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ပြီးရင် ရတဲ့သူက အရင်ထဆိုစတမ်းလေ။ ယောက်ျားလေးဖက်နဲ့ မိန်းကလေးဖက်အပြိုင်ပေါ့။ မိန်းကလေးတွေအလှည့်ဆို သူမလေးက အမြဲတမ်း ထဆိုတယ်။ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်လည်း အားကျမခံပေါ့။ အစကတော့ သူမလေးက မသိဘူးဗျ။ နောက်တော့ သတိထားမိသွားတယ်။ အမြဲတမ်း သူဆိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ယောက်ျားလေးဖက်က ထွက်တဲ့သူဟာ ကျွန်တော်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေ။ သူ့အလှည့်ပြီးပြီဆို ကျွန်တော်မတ်တတ်ထရပ်လိုက်တာနဲ့ သူမလေးဆီက မျက်စောင်းလှလှလေးတစ်ချက် ရောက်လာလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ သူမလေးရဲ့ မျက်စောင်းလေးတွေဟာ ကျွန်တော်စာစဆိုဖို့ အချက်ပေးနေသလိုပါပဲ။ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံယူမိလျက်သားဖြစ်နေတယ်။
ဒီနှစ်တော့ ကျောင်းမှာအတန်းချင်း တူရုံတင်မကဘူး။ ကျူရှင်ပါတူတယ်။ ကျွန်တော်လေ ပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ ကျောင်းကိုတော့ အဖေကလိုက်ပို့တယ်။ ကျူရှင်က အိမ်နဲ့နီးတော့ ဘီအမ်အိပ်စ် (BMX)စက်ဘီးလေးနဲ့ သွားခွင့်ရတယ်။ ကျူရှင်မှာ စက်ဘီးရပ်ရင် အမြဲသူမလေးရဲ့ စက်ဘီးနားမှာပဲ ကပ်ကပ်ရပ်တယ်။ ဟာ.. သူမလေးလဲ ဘီအမ်အိပ်စ်အနီလေးနဲ့ပါလား။ အဲဒီစက်ဘီးရပ်တာကနေစပြီး သူငယ်ချင်းတွေ သိကုန်တယ်။ လိုက်စကြတယ်။ သူမလေးတော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူးပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ပျော်လိုက်တာ။ ကျူရှင်မှာ ဆရာက သချာင်္တွက်ခိုင်းရင် မှန်လဲမှန် အရင်လဲပြီးတဲ့သူကို ပထမ၊ ဒုတိယ အဲဒီလိုပေးတယ်။ ပြိုင်တွက်ခိုင်းတာပေါ့။ အမြဲလိုလို ပထမချည်းရတာများတဲ့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်တဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းလေးပဲ စူတော့မလို ရန်ပဲတွေ့တော့မလိုပဲ။ အူယားစရာလေး။ ကျောင်းမှာဆိုလည်း ဆရာမက စာတော်တဲ့သူတွေဆို ကျက်စာများများပေးတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ အလွတ်ပြန်ရေးရတယ်။ မှားရင်တော့ လက်ဆစ်ကလေးတွေ တိန်တိန်မြည်ပေါ့။ အဲဒီမှာတော့ သူမလေးက အမြဲလိုလိုအခေါက်ခံရတာကနေ လွတ်တယ်။ သိပ်တော်တဲ့ သူမလေးပါလား။ ဒီလိုနဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားကြတာ ရီပို့ကတ် (Report Card)ရတော့ အမေကတောင် အံ့တွေသြလို့။ အဆင့်တွေ အမှတ်တွေကောင်းနေလို့လေ။ သားဖြစ်သူ ဘာလို့ ဒီလောက်ကြိုးစားနေလဲဆိုတာ သိရင်တော့... ဟင်းဟင်း။ ဒီလိုနဲ့ အတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးအောင်စာရင်းတွေ ထွက်တော့ ကျွန်တော် ဒုတိယ။ သူမလေးက ပထမ။ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ ဆုပေးပွဲကျတော့ "မခင်ကြည်ပြာနှင်း ပထမဆုယူရန် ကြွပါ" ဆိုတဲ့ အခမ်းနားမှူးရဲ့ ကြေညာသံနောက်မှာ အကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ လက်ခုပ်သံဟာ တစ်ခြားလူဟုတ်ရိုးလားဗျာ။
အချိန်ဇယားထဲမှာ ဒီအချိန်တွေကို အမုန်းဆုံးပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ အကြိုအသက်မွေးဘာသာရပ်တဲ့။ အလယ်တန်းရောက်ပြီဆို စသင်ရပြီ။ ရှစ်တန်းထိအောင်ပဲ။ တောင်ငူတစ်မြို့လုံးမှာ ဒီဘာသာသင်ရတာဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ အ.ထ.က(၂) အမျိုးသားကျောင်း ပဲရှိတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မိန်းကလေးတွေဆိုရင် အချက်ပြုတ်၊ အချုပ်လုပ်တွေ သင်ပေးတယ်။ စာတွေ့ရော၊ လက်တွေ့ရောပဲ။ အပင်လေးတွေ စိုက်လိုက်ကြ၊ မုန့်တွေလုပ်စားကြနဲ့ ပျော်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပျော်ပါဘူးဗျာ။ သင်ရတာက နှစ်တန်းစီပေါင်းလိုက်ပြီး ကျား သပ်သပ်၊ မ သပ်သပ်ခွဲလိုက်တော့ သူမလေးနဲ့ ကျွန်တော်ခွဲရတာပေါ့။ နောက်ပြီး နေ့ခင်းတစ်ပိုင်းလုံး အချိန်ဆက်တိုက်ကြီးလေ။ ကျွန်တော်တို့က စာဖတ်ဝါသနာပါတာလည်း တူတယ်ဗျ။ နေ့လည်ထမင်းပြန်စားပြီး ကျောင်းပြန်ရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်စားပွဲစောင်းထဲ လွယ်အိတ်ထိုးထည့်ပြီး ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ဆီ တန်းပြေးတော့တာပဲ။ သူမလေးက ထမင်းချိုင့်ပါတယ်လေ။ အဲဒီတော့ စာကြည့်တိုက်ကို အမြဲစောရောက်တာပေါ့။ အမြန်သွားနိုင်ကာမှ သူမလေးဖတ်တဲ့စားပွဲမှာ နေရာရမှာလေ။ ဟဲ.. ဟဲ။
ဒီလိုနဲ့ ရှစ်တန်းနှစ်မှာ သူမလေးနဲ့ ကျွန်တော် မမျှော်လင့်ပဲ ခွဲရဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ်။ သူမလေးတို့ တစ်မိသားစုလုံး မန္တလေးပြောင်းကြတော့မယ်တဲ့။ ပြောင်းတာမှ အိမ်တွေခြံတွေတောင် ရောင်းပြီး အပြီးပြောင်းကြမှာတဲ့။ ကျွန်တော်ဆွေးရပြီပေါ့။ သူမလေးလိပ်စာ တောင်းဖို့မပြောနဲ့ စကားတောင် ရဲရဲသွားမပြောရဲတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဆွေးရုံကလွဲလို့ ဘာများတတ်နိုင်မှာတဲ့လဲ။ ခုတော့ နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီပေါ့လေ။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လည်း မန္တလေးသားသူငယ်ချင်းတွေရတိုင်း သူမလေးနာမည်ပြောပြီး သူတို့နဲ့များ ကျောင်းတို့၊ ကျူရှင်တို့ အတူတူတက်ခဲ့ဖူးလေမလားလို့ သူမလေးရဲ့ သတင်းလေးဘာလေးရအောင် မေးရတာ အမောပါပဲ။ မန္တလေးကျောင်း ပြောင်းသွားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကျွန်တော့်ဒဏ်မလွတ်ပါဘူး။ MIT မှာများ တက်နေမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဆေးမန်းပဲ ရောက်နေပြီလား။ သူမလေးက စာတော်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့်လည်းလေ အချိန်တွေသာ ကြာခဲ့ပါတယ်။ သူမလေးအကြောင်း ဘယ်သူ့ဆီကမှ ဘာသတင်းမှ ခုထိမရခဲ့ပါဘူးဗျာ။ ။
သြော်... ခုတော့ဖြင့် ဒီတောင်ငူမှာလေ။ ။
စာကြွင်း။ ။တောင်ငူသားကို မချစ်တတ်ဘူး ပြောကြလွန်းသော သူငယ်ချင်းများကြောင့် ရေးပါသည်။
Posted by Taungoo at 9:03 PM
ဇတ်လမ်းက မစခင်ထဲက ဆုံးသလိုဖြစ်နေပြီ မြန်မြန်လေး ဆက်ပါဗျို့
ညီလည်းအကို့ လိုဘဲ အထက(၂) ကပါ။
ကြို / သက် အချိန်တွေဆိုပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်အကိုရ။
အချိန်တ၀က်လောက်က ခြင်းခတ်လို့ ရတယ်လေ …
စစ်တောင်းအဆောင် ကြားထဲကကွင်းပြင်မှာ.. 
အာအိုင်တီ ဆင်ဝင်မှာများ ပြန်ဆုံလေမည်လား၊ နွေးအေး မှာများ ပြန်ဆုံလေမည်လား၊ စိုးမြင့်ကြော် စားရင်းများ မျက်လုံးအဝေ့မှာ ပြန်တွေ့လေမည်လား၊ ဂျူတီကုတ်ဝတ် လူနာချစ်တဲ့ ဆရာဝန်မလေးအနေနဲ့များ ပြန်ဆုံလေမည်လား မျှော်နေမယ် တောင်ငူသားလေးရေ။
မဇနိကတော့ တတိယတန်းက ကွဲခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ မန်းချယ်ရီ ဒင်နာမှာ ပြန်ဆုံဖူးတယ်နော်။ အားမလျှော့နဲ့နော်။
Same as me ,but I'm finding until now.we have no chance to meet again each others
r u talking about the one from Ma Gway ???
hit me back man . . . it's funny somehow .
ps. if u r not my fri swan pyae
sry about this comment n delet it if u want to
ခုချိန်ထိလဲ..မ ok သေး...
အနော်လည်း တောင်ငူသားပါ သို့သော် အမှတ်(6)ကျောင်းထွက် လာအားပေးပါတယ်ဗျာ ..
အခုတော့အနော်က ရပ်ဝေးရောက်နေတယ်လေ ..
တောင်ငူဘလော့လေးဝင်လိုက်တော့ တောင်ငူပြန်ရောက်နေသလိုပါပဲ ..ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ..